Current१ हालका नि: शुल्क फन्टहरू जुन तिनीहरूको नाममा प्रसिद्ध छ क्रिएटिव अनलाइन
मानुएल रामीरेज | | ग्राफिक डिजाइन, Fuentes
हामी पछ्याउँदछौं नयाँ फन्ट फन्टहरू फेला पार्दै जसले हामीलाई हाम्रो वेबसाइट, ईकमर्स वा ब्लगमा त्यो विशेष टच राख्न सेवा गर्दछ, र यसरी बाँकीबाट बाहिर जान सक्षम हुन्छ वा कमसेकम, कुञ्जी शव्द प्रयोग गर्दा गुगल खोजी ईन्जिनबाट झरेका आगन्तुकको ध्यान खिच्छ।
हामी स .्कलन गर्नेछौं Best१ उत्तम हालको नि: शुल्क फन्टहरू जुन विशेष रूपमा सबै प्रकारका डिजाइनरहरूको लागि आउँदछ। नि: शुल्क कलको लायकको योग्य रहेका उच्च-गुणवत्ता फन्टहरूको श्रृंखला, जुन हाम्रो वेब कार्य हाइलाइट गर्न अनुमति दिन्छ। त्यस 31१ नि: शुल्क फन्टहरूको साथ यसलाई प्राप्त गरौं।
1 इमरल लिपि
2 आईबीएम प्लेक्स
3 वाफल बनाउनुहोस्
4 चेक गर्नुहोस्
6 पुन: रहित
9 धेरै काउबॉयहरू
12 अर्को कला
13 एटीएफ स्पार्क
16 जिला स्लैब
17 जिनोरा सान्स
20 गुडटाइम बनाउनुहोस्
28 बिरालोको बच्चा
30 ग्रैंड होटल
व्यक्तिगत प्रयोगको लागि स्रोत, लाइसेन्सको लागि तपाईले बाकस भित्र जानु पर्छ, र त्यो ती वक्र आकारहरू द्वारा विशेषता हो एक हस्तनिर्मित शैलीमा जुन उत्पादनहरूको लागि धेरै आकर्षक छ।
यो टाइपफेस खुला फन्ट लाइसेन्स प्राप्त छ, ताकि तपाईं यसलाई जुन तपाईं चाहनुहुन्छ को लागी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो २०१ike मा आईबीएमको नयाँ कर्पोरेट पहिचानको लागि माइक एबिंक र बोल्ड सोमबारले सिर्जना गरेको हो।
नि: शुल्क वाणिज्य प्रयोगको लागि अर्को स्रोत र त्यो सबैको साथ एक विशेष लि has्क छ पेस्ट्री संग गर्न छ र भान्छा। यसमा दुई स्रोतहरू छन्।
धेरै सुरुचिपूर्ण फन्ट तपाईंसँग यसको नियमित र कालो संस्करणहरूमा दुवै वाणिज्यिक र व्यक्तिगत प्रयोगको लागि नि: शुल्क छ।
व्यावसायिक प्रयोगको लागि अर्को फ्रि फन्ट यस सूची मा शानदार देखिन्छ f१ फन्टहरूको।
हामी यसको लागि नि: शुल्क वाणिज्य प्रयोग पहुँच गर्न सक्षम नहुने इच्छाको साथ छोडियो थोरै विद्रोही टाइपोग्राफी र बाँकी भन्दा फरक।
व्यक्तिगत प्रयोगको लागि फन्ट नोर्डिक सुविधाहरू छन्। कुनै श doubt्का बिना यसको विशेषता सुविधाहरू र बाँकीबाट राम्ररी भिन्नताको लागि हड्ताल।
व्यक्तिगत प्रयोगको लागि नि: शुल्क फन्ट जुन सबै ब्लग वा वेबको विषयको साथ धेरै विशेष लि link्क गर्दछ प्रकृति संग गर्न छ.
una व्यावसायिक प्रयोगका लागि आँखा-फ्याँक्ने फन्ट र व्यक्तिगत जुन पहिलो क्षणबाट हामीलाई धेरै अमेरिकी सम्म पुग्छ।
una पूर्ण रचनात्मक फन्ट व्यक्तिगत प्रयोगको लागि जुन 'आर्ट डेको' भएकोमा गर्व गर्दछ।
नि: शुल्क फन्टका लागि var भेरियन्टहरू व्यक्तिगत प्रयोगको लागि जुन टाइपफेसमा त्यो जंगली र रमाईलो पक्ष खोज्छ।
यसको साथ एक सुरुचिपूर्ण टाइपफेस कलात्मक को लागी धेरै कौशल यसले कसैलाई पनि उदासीन बनाउँदैन। हो, तपाईं यसलाई व्यापारिक कुनै चीजको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले अगाडि बढ्नुहोस्।
लेखक दावी गर्दछ कि यो एक नि: शुल्क स्पार्कलाइन फन्ट हो, जसको मतलब हो संख्यालाई डाटा दृश्यमा रूपान्तरण गर्नुहोस्.
एक झरना जो जान्छ एक पासवर्ड को रूप मा भव्यता। केवल नकारात्मक पक्ष भनेको तपाईंले यसलाई व्यक्तिगत केहि प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि एउटा सेन्स सेरिफ टाइपफेस गुगल फन्टबाट वाणिज्य प्रयोग। मसँग सात भिन्नताहरू बोक्न सक्ने हिम्मत छ त्यसैले तपाईं तिनीहरूलाई कुनै उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यो स्रोत मोजिला मुख्य हो, एक बर्ष पहिले यसको लोगो परिवर्तन भयो, र मुख्य कनेक्शनको लागि प्रयोग गर्दछ जुन यसको सेवाहरूले प्रस्ताव गर्दछ जस्तै तपाईंको ब्लग वा वेब ब्राउजरमा।
मोजिला जस्तै, अर्को स्रोत व्यावसायिक प्रयोगको लागि निःशुल्क त्यससँग पर्याप्त भिन्नताहरू हुन्छन् कि केहि तपाइँको आवश्यक्तामा फिट हुन्छन्।
फोहरा धेरै ब्रिटिश र ए Anglo्ग्लो-सेक्सन जुन सबै प्रकारका उद्देश्यहरूका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत प्रयोगको लागि मात्र नि: शुल्क।
व्यक्तिगत प्रयोगको लागि टाइपोग्राफी जस्तो हामी हो हातले लेखन ठूलो भिन्नता संग।
को लागी व्यक्तिगत प्रयोग लाइसेन्स एक विचित्र फोहरा दुई भिन्नताहरू समावेश गर्दै। अर्को स्रोत जुन ग्यास्ट्रोनमीसँग नजिकबाट सम्बन्धित छ।
नयाँ स्रोत छ जुन दुबै ज्यामितीय विचारहरु मर्जको महान मूल्य यस सूचीमा एक कृतज्ञ हुन को रूप मा नरम। नि: शुल्क व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्रयोग।
एक साथ व्यक्तिगत प्रयोगको लागि एक फन्ट फन्ट धेरै स्पष्ट ग्यास्ट्रोनोमिक मोटिफ। यदि तपाईं यसलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले लेखकलाई सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
वाणिज्य यसको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र, त्यसैले तपाईंसँग छ हातमा एक सेरिफ फन्ट सुन्दर हेडर र लोगो डिजाइनहरू सिर्जना गर्न।
वाणिज्यिक / व्यक्तिगत प्रयोगको लागि फन्ट फन्टको लागि ब्रश प्रकार। भनेर विस्तृत रूपमा छ सजिलो पढ्नका लागि अनुकूलित छ मध्यम आकारमा।
विशेष फन्ट व्यक्तिगत प्रयोगको लागि कुनै श doubt्का बिना।
एक निःशुल्क वाणिज्यिक / व्यक्तिगत फन्ट जुनसँग छ एक लापरवाह हावा धेरै उल्लेखनीय
एक टाइपफेस धेरै ठिक र न्यूनतम sans serif सबै प्रकारका रोजगारहरूको लागि। सूचीमा हाइलाइटहरू मध्ये एक। नि: शुल्क व्यक्तिगत र व्यावसायिक प्रयोग।
एक संग भेरियन्टको महान विविधता, 40० भाषाहरूमा ढाक्न सक्षम छ जुन ल्याटिन वर्णमाला प्रयोग गर्दछ। धेरैलाई ध्यानमा राख्नु र विगत दुई बर्षको सब भन्दा राम्रो मध्ये एक हो।
आजको लागि ताजा फव्वारा हामी सबै घण्टामा मोबाइल उपकरणहरू प्रयोग गर्दछौं। नि: शुल्क व्यावसायिक र व्यक्तिगत प्रयोग।
मा आधारित फिल्म हेडर शीर्षक क्याफे मेट्रोपोल टायरोन पावर द्वारा। धेरै हडताल र व्यक्तिगत र व्यावसायिक उपयोगको लागि नि: शुल्क।
यसको ऐतिहासिक स्पर्श छ सुरुचिपूर्ण र न्यूनतम यो सूची मा सबै ती मध्ये एक धेरै सुविधाजनक ठाउँमा छोड्छ। नि: शुल्क लाइसेन्स
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » Fuentes » शीर्ष Current१ वर्तमान डिजाइनरहरूको लागि फन्ट फन्ट
ओस्वाल्डो मोन्टिला भन्यो
धन्यवाद राम्रो मित्र .. !! तपाईंले ती स्रोतहरूको साथ मलाई साँच्चिकै मद्दत गर्नुभयो, म यसको कदर गर्छु
ओस्वाल्डो मोन्टिलालाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँ ओस्वाल्डोलाई स्वागत गर्नुहुन्छ! अभिवादन
राम्रो योगदान को सराहना गरियो।